နယ်စပ် ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်များကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆ?? - Yangon Media Group
နယ်စပ် ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်များကို အပြည့်အဝ ထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆ??
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူ
နေပြည်တော်၊ စက်တင်ဘာ ၁၂
နယ်စပ်ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်များကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန် ခက်ခဲသည့်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးတား ဆီးနှိမ်နင်းရေးအတွက် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ် အောင်သူက ပြောကြားလိုက်သည်။
စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် (အမှတ် ၂ )မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၏ ယခုအခါတွင် ရာဘခေါ် စိတ်ကြွဆေးပြားများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ နေရာဒေသအနှံ့အပြား၌ ဈေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သော အခြေအနေဖြစ်အောင် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်မှုများအား ထိရောက်စွာတား ဆီးနှိမ်နင်းရန်အတွက် စီမံဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ မေးခွန်းအပေါ် ၎င်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”နယ်စပ်ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်များကို အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲတဲ့အတွက် ပရီဆာကာ (မူးယစ်ဆေးဝါးပြုလုပ်ရာ အသုံးပြုသည့် ဓာတုပစ္စည်း)များ ဝင်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝ မထိန်းချုပ်နိုင်သဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါး တားဆီးနှိမ်နင်းရေးမှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည့်ပရီဆာကာ ၂၃ မျိုးအပြင် နိုင်ငံတော်၏ လိုအပ်ချက်အရ ကဖိန်းတာရိုမိုင်း၊ ကလိုရိုက်ဆာလဖိန်း၊ ပြည့်ဝဆီစသည့် သုံးမျိုးကိုလည်း ပရီဆာကာအဖြစ် ထပ်မံထည့်သွင်းထားသဖြင့် ထိန်းချုပ်ဓာတု ပစ္စည်း ၂၆ မျိုး သတ်မှတ်ထားရှိကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါး ဓာတုပစ္စည်း များဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၊ မဲခေါင် MOU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင် ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက်သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီများနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
”၂ဝ၁၈ ခုနှစ်မှာ မူးယစ်ဆေး ဝါးဓာတုပစ္စည်း ပရီဆာကာ၊ ဓာတ်ခွဲသုံးပစ္စည်းများကို အမြောက်အမြားဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းဆီးရမိမှု ၂၇ မှုရှိခဲ့ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သိန်းကျော်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ပရီဆာကာများကိုအသုံးပြု၍ စိတ် ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားထုတ်လုပ်ပါကစိတ်ကြွဆေးပြားသန်း ၁၅ဝ ခန့်ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ ဘိန်း ၂ ဒသမ ၄၃ တန်အား အဆိုပါ ပရီဆာကာများနှင့် ထုတ်လုပ်မည်ဆိုပါက ဘိန်းဖြူ ၂၅ဝ ကီလို ဂရမ်ခန့် ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်”ဟု၎င်းကပြော သည်။
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်းဦးက ”ယခုအခါမှာ စိတ်ကြွဆေးပြားချက်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူရရှိအောင် စီစဉ်နိုင်ခြင်း၊ ဆေးပြားရိုက်စက်များကို သေးငယ်ကျစ်လျစ်အောင် ဖန်တီးပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် နေရာဒေသမရွေး အလွယ်တကူ ထုတ်လုပ်လို့ရနိုင်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနှံ့ တောရောမြို့ပါ ချောင်ကြိုချောင်ကြားပါမကျန် အလွယ်တကူကိုဝယ်ယူသုံးစွဲလို့ ရနေပါပြီ။ ဒီလိုပေါများလွယ်ကူလာတော့ သုံးစွဲသူလူ ဦးရေကလည်း ကြောက်ခမန်းလိလိတိုးပွားလာပါတယ်။ ကျောင်းသားငယ်၊ အမျိုးသမီးငယ်၊ ကလေးငယ်လေးတွေအထိပါ သုံးစွဲလာကြပါတယ်။ ဒီလိုသုံးစွဲမှုတွေနဲ့အတူ ရာဇဝတ်မှုတွေကလည်း ထူပြောလာပါတယ်။ အလွယ်တကူထုခွဲရောင်းချလို့ရတဲ့ ဖုန်း၊ ဟန်းဆက်၊ ဆိုင်ကယ်တွေကို ရိုက်နှက်လုယက်လာကြပါတယ်။ ဆေးအရှိန်နဲ့စိတ်ကြွပြီး မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်ဆန် လူကိုသတ်ပြီး လုယက်လာကြပါတယ်။ ဒီစိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးဝါးတွေကြောင့် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ များပြားလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတွင် ဒီရေတောများ ထိန်းသိမ်း စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများကို WIF အဖွဲ့က ?
အခကြေးငွေယူပြီး ခရီးသည်တင်ယာဉ်ပေါ် တင်ဆောင် လာသည့် ဘင်္ဂါလီခြောက်ဦးကို ငဖဲတွင် ဖမ်းဆီးရမိ
မန္တလေး ခွေးချစ်သူများအတွက် ခွေးအလှပြပွဲပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
ရေဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်လာပါက ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရေဘေးကာကွယ်ရေး သဏ္ဌ
နှစ်သစ်ကူး ကာလတွင် မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် ရိဒ်ရေကန်နှင့် လေသာတောင်သို့ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဧည့်သည??
ဘဝနေဝင်ချိန်ရောက် အချစ်၏ အလှတရား Autumn Sonata ရုပ်ရှင်